Native Android app tsigiro ye Windows 10 ichiri munzira yekutangisa kwe2021
Mushure mekusiya Project Astoria, Microsoft yanga ichitsvaga nzira dzekuunza maapplication eApple ku Windows 10 uye yatove nekugonesa kutsigira rutsigiro kuburikidza neYako Runhare app yekusarudza Samsung mafoni. Pfungwa yazvino yeMicrosoft ndeye "Project Latte", iyo inotarisira kubatsira vanogadzira kupakata yavo nharembozha seMSIX uye inogonesa rutsigiro rwechinyakare rweiyo Android subsystem. The… [Verenga zvakawanda ...] nezve Native Android app tsigiro ye Windows 10 ichiri munzira yekutangisa kwe2021
Zvirinani ita chokwadi chako Windows 10 zvigamba zvasvika parizvino, seGoogle Projekiti Zero ichangoburitsa Proof yeConcept kodhi yeakango-patched Windows 10 kukanganisa kunogona kushandiswa nekungoshanyira peji rewebhu. Nyaya iri kukanganisa muMicrosoft DirectWrite, iyo Windows font renderer iyo inoshandiswawo mumabhurawuza ese, uye iri panjodzi yeiyo yakanyatsogadzirwa TrueType… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle kuburitsa inoshandisa kodhi yezvakango patched Windows 10 Remote Code Kuuraya bug
Windows 10 KB4601382, inova chikamu cheFebruary 2021 chigamba kutenderera, iko zvino kwave kutenderera kuenda kumaPC pane vhezheni 20H2 na2004. Kune avo vanoda kunyorera iwo manyore, nongedzera kurodha pasi kurodha Windows 10 KB4601382 offline installers anowanikwawo. Windows 10 KB4601382 ndeye sarudzo yekusarudzika uye inogona kuiswa nekunyanya kudzvanya pane 'Dhawunirodha uye gadza'… [Verenga zvakawanda ...] pamusoro Windows 10 KB4601382 (20H2) yave kubuda nekuvandudza
Maitiro Ekufambisa Chero Kunze-Screen Chishandiso Kudzokera Ku Main Window
Unombosangana nedambudziko kupi Windows hausi kuzounza iyo app yauri kushandisa kumberi chaiko? Zvisinei kana iwe wakadzora kana kukwidziridzwa, kana kuyedza kuchinjira kune rakasiyana skrini (mune yakawanda-yekutarisa mamiriro) kuburikidza Windows kiyi + Miseve kuruboshwe uye kurudyi, iyo app haioneke. Kana mhinduro yako yakamanikidzwa kuvhara uye kutangazve iyo app ipapo unogona kufarira… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekufambisa Chero Kunze-Screen Chishandiso Kudzokera Ku Main Window
Kuongorora BSOD Inopwanya iyo Nyore Nzira mu Windows 10
Kuva pamusoro Windows, iyo Blue Screen yeRufu (BSOD) inoita kunge isingadzivisike, asi inozoita zvishoma uye zvishoma nekuvandudza kuri Windows 10 pamusoro pemakore achangopfuura. Kana zvikaitika kazhinji kupfuura zvaunogona kutsungirira, inguva yekuchera pasi kuti uwane pasi payo. Tazivisa nzira yekugadzirisa nayo, iyo inoshandisa kuraira-mutsara unobatsira unonzi dumpchk kuongorora memory dump faira ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Monitoring BSOD Inorova iyo Nyore Nzira mu Windows 10
Enda kune peji 6